အောင်မြင်သော B2B ပါ ၀ င်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသည်အာဏာကိုလိုအပ်သည် Martech Zone
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်သူတို့၏အကြောင်းအရာနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရုန်းကန်နေကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏နည်းဗျူဟာများသည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ထုတ်ကုန်များ၊ သတင်းများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ပြောင်းခြင်းများသို့မဟုတ်အပတ်စဉ်အချိန်ဇယားများကပင်ထုတ်ဝေလိုက်သောအကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြသည်။
ပြproblemနာတစ်ခုမှာသင်၏စီးပွားရေး 'စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်သည်သင်၏အလားအလာကိုပုံမှန်အတိုင်းမလုပ်ဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလားအလာရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင်နှစ်စဉ်နေ့တိုင်းသို့မဟုတ်ရာသီအလိုက်သို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်သံသရာဖြင့်သင်ပေးနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ အချိန်ကောင်းသည် ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သောစနစ်များအတွက်ကတိတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ အချိန်ဇယား။
သို့သော်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုသည်အားနည်းချက်များမရှိသေးပါ။ ကုမ္ပဏီအတော်များများသည်ဖောက်သည်အချက်အလက်များကိုအကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးဖြင့်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်စုစည်းထားကြသည် ဘဝဖြစ်စဥ်။ အမှန်မှာအမှန်မှာ၊ စီးပွားရေးတစ်ခုစီသည်မိမိတို့၏အချိန်ဇယားအတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြသည် - အလွန်ခက်ခဲလွန်းပြီးမကြာမီအချိန်တွင်သင်အလားအလာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲယူပါနှင့်သင်ပြိုင်ဘက်သည်အရောင်းရဆုံးလိမ့်မည်။
အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရှုထောင့်မျိုးစုံရှိသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်နေ့စဉ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခု၊ အပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းလွှာ၊ လစဉ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးလတစ်ကြိမ်စာအိတ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည်လက်ရှိရှိနေရန်လိုအပ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမရရှိပါ။ အလားအလာကရှာဖွေနေသည့်အခါရောက်ရှိခြင်းမှန်ကန်သောတည်နေရာအတွက်မှန်ကန်သောအကြောင်းအရာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ခိုင်မာသည့်အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်များ၊ အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်လူထုဆက်ဆံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်ကြသည်။ အလိုအလျောက်နည်းပညာအသစ်များသည်စက်သင်ယူခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးချပြီးအနာဂတ်နှင့်အလားအလာရှိသောဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ဖောက်သည်အပေါ်မှီခိုသောအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းသို့လမ်းလျှောက်ရန်ဖြစ်သည်။
ပြနာတစ်ခုမှာအရည်အချင်းရှိသောပြိုင်ဘက်များအားလုံးသည်တူညီသောထောင့်နှင့်အလားတူလုပ်ဆောင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုအဆုံးမဲ့ထပ်ခါတလဲလဲသံသယဖြင့်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရန်မလုံလောက်ပါ။ စီးပွားရေး ဦး ဆောင်မှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလားအလာတစ်ခုမှအရည်အချင်းပြည့်မီသော ဦး ဆောင်မှုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုအပ်သည် အရည်အချင်းပြည့်မှီသောရောင်းချမှုကိုရောင်းချရန်ယုံကြည်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အဖြေတစ်ခုရှာကြသောအခါ၎င်းတို့သည်၎င်းမှရှာဖွေသည် အာဏာ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စွန့်စားရမှုများကိုလျှော့ချလိုကြသည်၊
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများအောင်မြင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သော်လည်းအာဏာပိုင်များကိုမကြာခဏသတိမထားမိကြပါ။ ဒီ Tweet!
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်စေရန်အတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသောသြဇာရှိသူများအားအကူအညီပေးသည်။ ကျနော်တို့ကဒီမဟာဗျူဟာနှင့်အတူရောထွေးရလဒ်များကိုမြင်ကြပြီ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု မကြာခဏတကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကျော်ကြားမှု အွန်လိုင်း။
အခွင့်အာဏာရရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းအားပေးချေခြင်းမဟုတ်ပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီ Tweet!
အကြောင်းအရာနှင့်အခွင့်အာဏာတည်ဆောက်ခြင်းသည်အကြောင်းအရာအသစ်ကိုတီထွင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၌ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောအကြောင်းအရာတိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်လမ်းမများကိုမောင်းနှင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘ ၀ သံသရာအတွင်းသို့သွားရန်အလားအလာများကိုရွေ့လျားခြင်းမရှိသောပြင်ပအကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
အခွင့်အာဏာအတိုင်းအတာအရ Google ထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သောစနစ်မရှိပါ။ ဂူဂဲလ်၏ algorithms သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ တည်နေရာများ၊ ထုတ်ကုန်အမည်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူများအကြားဆက်စပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိမရှိသံသယရှိပါကအွန်လိုင်းသုတေသနအတွက်မည်သည့်အလားအလာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်သည်ကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များကိုကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ရန်၊ သင်သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရမည်။ ပေးထားသောသော့ချက်စာလုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုအတွက်၎င်းသည်သင့်အားရှာဖွေမှုကိုအနိုင်ရပြီး ပို၍ အသေးစိတ်ကျသောအလုပ်များကိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြိုင်ဘက်များကကျွန်ုပ်တို့ထက်အဆင့်မြင့်သောခေါင်းစဉ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဗွီဒီယိုများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကိုပြုစုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဆင့်အတန်းမမီသောအဆင့်မြှင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်ယခုအခါ ၁၀၀% သောအကြောင်းအရာအသစ်ထုတ်လုပ်မှုမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားပြီ အသစ် ၅၀% နှင့်လက်ရှိအကြောင်းအရာ ၅၀% ပို့ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာနည်းဗျူဟာများသည်ဆောင်းပါးအသစ်များ၊ အရုပ်နှင့်ရုပ်ပုံများကိုအမြဲထုတ်လုပ်ခြင်းမှဝေးကွာသွားခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီး၎င်းကို URL အသစ် (တူညီသော URL တွင်) ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရမြှင့်တင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လက်လှမ်းမီမှုအမြင့်ဆုံးရရှိရန်အတွက်ပေးသောနည်းဗျူဟာများကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
သောကြောင့်ထိုသို့သောကြောင့်ဖြစ်သည် အကောင်းဆုံး အကြောင်းအရာကပိုကောင်းအဆင့်သတ်မှတ်လိမ့်မယ်။ ရလဒ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရှိသည်။ ရာနဲ့ချီတဲ့သော့ချက်ကျတဲ့သော့ချက်ခေါင်းစဉ်များတစ်လျှောက်ပျမ်းမျှအဆင့် ၁၁ မှပျမ်းမျှအဆင့်သို့ ၃ သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲမှုများသည်ခဲဝယ်ယူမှုအတွက် ၂၇၀% ကျော်တက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခဲအရည်အသွေးတိုးတက်နေစဉ်ခဲတစ်ခဲလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်ကျဆင်းနေသည်။
ဒီအပေါ်နောက်ဆုံးမှတ်စု။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထက်အာဏာကိုလူတွေကပိုလွယ်အောင်လုပ်တယ်၊ Apple သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Steve Jobs၊ Jonathon Ives၊ Tim Cook၊ Steve Wozniak၊ Guy Kawasaki စသည့်နာမည်ကြီးတံဆိပ်များမပါရှိပေ။
သင်၏လူများအားအခွင့်အာဏာရှိသူများဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်း ပေး၍ သင်၏စီးပွားရေးအခွင့်အာဏာကိုသင်အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ သင်၏ခေါင်းဆောင်များအားဖြစ်ရပ်များနှင့်ညီလာခံများ၌စကားပြောခြင်းကိုမြင်ခြင်းကသင်၏စီးပွားရေးကိုသက်ဆိုင်ရာနှင့်အချိန်မီဖြစ်သောပရိသတ်ရှေ့တွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်သင်၏အခွင့်အာဏာကိုပြသနိုင်ပြီးအလားအလာရှိသည့်ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ရောင်းအားပိတ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။
Tags: အာဏာb2bb2b အခွင့်အာဏာb2b ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းအရာအခွင့်အာဏာGuy KawasakiJonathon IvesSteve Jobsစတိဗ် WozniakTim Cook က